यी नेताहरुले रअ प्रमुखसँग भेटेर पनि किन लुकाए ? - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > यी नेताहरुले रअ प्रमुखसँग भेटेर पनि किन लुकाए ?
October 25, 2020 October 25, 2020 GRISHI50
भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको एक दिने नेपाल बसाईको भ्रमणले यतिवेला नेपाली राजनीतिक तरंगित बनेको छ ।
भारतनिकट स्रोतले जनाएअनुसार रअ प्रमुखले प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुपुर्व नै नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले भेटेका थिए ।
त्यसको अलावा कांग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल र सशांक कोइरालाले पनि गोयलसँग भेटेका थिए ।
उता, जनता समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भेटे गरेको बताईएको छ । यी ६ जना नेताहरुले रअ प्रमुखसँग भेटेर पनि किन भेट भएको छैन् ? भनेर कुरा लुकाए ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यी नेताहरुसँग कतिपय गोयल बसेको होटलमा पुगेका थिए भने कतिपय नेतालाई भेट्न गोयल आँफै उनीहरुको निवास पुगेका थिए ।
प्रचण्ड–नेपालको रणनीति : रामचन्द्रलाई राष्ट्रपतिपछि देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर